विपन्नलाई दसैँ टार्न धौधौ भो ! « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
विपन्नलाई दसैँ टार्न धौधौ भो !
२७ आश्विन २०७८, बुधबार ९ : २४ बेलुका
चारैतिर दसैँको रौनक छ । घरदेखि परदेशमा रहेकाहरू घर फर्किरहेका छन् । गाउँदेखि शहरमा दसैँको रौनक बढेको छ । हुने खाने वर्गहरू दसैँमा के खाने भनेर तयारी गरिरहेका छन् । तर, सुनिता बिकको घरमा दसैँ आएको कुनै महसुस नै छैन। श्रीमानको मृत्यु भइसकेको छ । छोरा साथमा छैनन् । दुई छोराछोरी छोडेर बुहारी पनि अन्तै बिहे गरेर गइसकेके छन् । तुलसीपुर–६ कि सुनितालाई भने हरेक वर्षझैँ यसपालि पनि दसैँलाई कसरी विदाइ गर्ने भन्ने पिर छ । ज्यान पाल्ने समस्या भइरहेको समयमा दसैँ तिहारजस्ता ठूला चाडपर्व आउँदा उनलाई झन् बढी समस्याले सताउने गरेको छ ।
तर, पनि उनले हरेश खाएकी छैनन् । ‘साथमा कमाउने कोही नभए पनि जसोतसो दैनिकी चलेको छ’, उनले भनिन्, ‘अरुबेला भन्दा चाडपर्वमा बढी समस्या हुने गरेको छ ।’
उमेरले करिब ६ दशक पूरा गरिसकेकी सुनिताले चाडपर्व आउँदा बढी समस्या हुने गरेको बताइन् । सल्यानबाट करिब तीन दशकअघि बसाइ सरेर तुलसीपुरमा आएकी उनीसँग अहिले आफ्नो नाममा जग्गा पनि छैन । खानसमेत समस्या भइरहेको समयमा कोठाभाडा बुझाउन समस्या हुने गरेको उनले बताइन् ।
प्रकाश नेपाली तुलसीपुरको एक गोदाममा रोजगारी गर्छन् । उनले गोदामबाट दैनिक चार सय आम्दानी गर्छन् । तर, रोजगारीबाट उनी सन्तुष्ट छैनन् । अन्य समयमा दैनिकी चलाउन समस्या नभए पनि दसैँतिहार जस्ता चाडपर्व आउँदा खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता उनलाई हुन्छ ।
‘रोजगारी गरेको कमाइले दसैँ खर्च जुटाउन समस्या हुन्छ’, उनले भने, ‘दसैँ आउँदा अरु खुसी हुन्छन् । तर, हामीलाई भने चिन्ता हुन्छ ।’
दुई छोराछोरीसहित चार जनाको परिवारलाई अरु समयमा पनि दैनिकी चलाउन समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘अरु समयमा खर्च जसोतसो गरेर चलाउने गरेको छु’, उनले भने, ‘यसपालि झनै कोरोना महामारीले समस्या पारेको छ, ।’
तुलसीपुर–१६ रत्गैँका रन्जना विक उमेरले १५ वर्षको मात्रै भइन् । तर, उनी घरको अभिभावक हुन् । केही समयअघि बुबाको मृत्यु भयो र आमा दोस्रो बिहे गरेर गएपछि उनलाई दसैँ रमाइलोभन्दा बढी दुःखको पर्व हुने गरेको छ ।
चाडपर्व आउँदा आफूलाई भन्दा पनि भाइबहिनीलाई खुसी बनाउने जिम्मेवारी उनलाई छ । ‘मैलेभन्दा पनि भाइबहिनीहरूलाई पनि खुसी बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको छु’, उनले भनिन्, ‘आम्दानी हुने कुनै बाटो नहुँदा दसैँतिहारजस्ता ठूला चाडपर्व आउँदा बढी समस्या हुने गरेको छ ।’
चारैतिर दसैँको रौनक चलिरहँदा उनलाई भने निराशा बढी हुने गरेको छ । ‘अहिलेसम्म हरेक दसैँले खुशी भन्दापनि समस्या थपेर जाने गरेका छन् ।